Dagaal u dhaxeeya labo Belood oo kadhacay gobalka Hiraan (dhegayso) – Radio Daljir
Abriil 14, 2018 11:18 b 0
Ugu yaraan 7 qof ayaa ku dhimatay dagaal beeleed ka dhacay degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan.
Dagaalkaan ayaa yimid markii ay isku darsameen xoladhaqata labada maleeshiyaad.
Gudoomiyha degmada Maxaas Maxamed Cabdi Cawaale ayaa Radio Daljir usheegay in odayaasha labada dhinac ay yeeshen kulamo lagu dajinaayo xaalada.
Zubeyr Shiikh Cabdi ayuu uga waramay dagaalka dhexmaray maleeshiyaadkaasi.
Dowladda Imaraadka oo Saraakisheeda Kala Baxday Puntland (Sawiro)